BREAKING!Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo armaan gadii irra gahanii jiru. Kun injifannoo guddaa dha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBREAKING!Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo armaan gadii irra gahanii jiru. Kun injifannoo guddaa dha.
BREAKING! Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo armaan gadii irra gahanii jiru. Kun injifannoo guddaa dha.
Nutii Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) jijjiirama siyaas-dinagdee yeroo ammaa naannoo fi biyya keenya keessatti dhufe irratti yeroo dheeraa fudhannee marii bal’aa geggeessineerra. Qaama hawwaasaa Oromoo adda addaa marisisuun, haala siyaasaa, nageenyaa, dinagidee fi hawaasummaa Oromiyaa, Itoophiyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa gaddifagenyaan xiinxalleerra. Mariifi xinxala goone keessatti gaaffi qabsoo Oromoo irratti garaagarummaa bali’aa akka hin qabne hubanneerra. Hanqinni guddaa moora qabsoo Oromoo keessa waggoota dheeraaf ture wal-hubannoofi wal-dhaggeettiin JSO gidduutti dhabamuu ta’uu isaa adda baafanneera. Carraa jijjiiramaa ammaan kana argametti fayyadamuudhaan hanqinoota nu gidduu jiran furuun moora qabsoo Oromoo jabeessuun gaaffii ummatni Oromoo baroota dheeraaf gaafachaa ture, itti qabsaa’aa fi wareegama qaalii itti baasaa ture deebisuuf haala nu danddeesisu adda baasneerra. Kanaafis dhimmoota bu’uuraa Ejjennoo Waloo irratti waaliin qabaachuu qabnu adda baasnee irrattis waliigallee jirra.
Dhimmoota bu’uraa Ejjennoo Waloo irratti qabanne kun gaaffii saba Oromoo kan waggoota dheeraaf gaaftamaa turee deebisuuf hedduu ni gargaaru jennee amanna. Ejjennoo Waloo irratti waliigalle kun qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa jennee amanna. Akkasumas mirga sabaa fi sablammoota biroo naannoo Oromiyaa keessa jiraataniifi kan biyyattii keessa jiran hunda kan tiksufi waliinjireenyaa obbolummaa isaan saba keenyaa waliin qaban kan cimsudha jennee amanna. Kana malees, Ejjennoo Waloo Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo (JSO) irratti waliif-galan adda baafachuu nu jidduu fi saba Oromoo jiddutti miirri walhubannoo, waldeeggaruufi wal-utubuu, akkasumas dantaa fi fedhii Oromoo bu’uuraa irratti waliin dhaabbachuufi waliin-qabsaa’uu uumuudhaan itti baha qabsoo Oromoo milkeessuuf haalaan kan gargaaruufi kan aangessu ta’uu irratti waliigalleerra.